Banaanbax looga soo horjeedo Maamulka Somaliland oo ka dhacay gobolka Ceyn(Dhegayso) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Banaanbax looga soo horjeedo Maamulka Somaliland oo ka dhacay gobolka Ceyn(Dhegayso)
Banaanbax looga soo horjeedo Maamulka Somaliland oo ka dhacay gobolka Ceyn(Dhegayso)
April 4, 2010 - By: Abdirahman. A
Banaanbax balaaran oo looga soo horjeeday Maamulka Somaliland ayaa maanta ka dhacay degaano hoos tega gobolka Ceyn.
Boqolaal dadweyne ah oo ku nool degmada Widh-widh oo qiyaasti 45-KM dhanka Bari kaga beegan degmada Buuhoodle ee xarunta gobolka Ceyn ayaa ahaa mid looga horjeeday fara gelinta maamulka Somaliland ay ku hayso gobolada Sool,Sanaag iyo Ceyn.
Weriye madax banaan oo lagu magacaabo C/raxmaan Cumar Cabdi oo ku sugnaa halka uu mudaharaadki ka socday ayaa sheegay in Ururada Bulshada iyo shacabka ku dhaqan degmadaasi ay si wadajir ah usoo qaban qaabiyeen banaanbaxaas.
Dhegayso warbixinta Widh Widh ee Weriye C/raxmaan Cumar uu ka soo diray Degmada Widh-widh [powerpress]
Waxaana mudaharaadka ahaa mid jawi degan kusoo dhamaaday oo aan wax rabsho ah ka dhicin,iyadoo sidoo kale dadku ay soo dhoweeyeen hogaanka Beelaha SSC ee dhowaan lagu soo doortay magaalada Nairobi ee caasimada Kenya.
Mudaharaadka oo saaka bilawday ayaa barqadnimadi marki ay soo gaartay saacadu ay dadweynuhu kala tageen,waxaana ay iyagu wateen boorar ay ku cambaareynayeen maamulka la magacbaxay Somaliland.
Hore ayaa degmada Widh Widh ee gobolka Ceyn ka dhacay mudaharaadyo kala duwan oo looga soo horjeeday maamulka Somaliland fara gelinta ay ku hayaan gobolada Sool,Sanaag iyo Ceyn.
Tagged With: Banaanbax, Gobolka Ceyn